Wararkii ugu dambeeyey ee G Sanaag, Xaggeese PL geysay ciidamadii kasoo goostay Somaliland? – Puntlandtimes
BADHAN(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Badhan ee gobalka Sanaag ayaa sheegaya in ay wali magaaladaas joogaan masuuliyiin katirsan dawladda Puntland, uuna hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiim Dhooba-Daareed oo ay kulamo la qaadanayaan waxgaradka iyo saraakiisha hogaaminaysay ciidamadii soo goostay.
Taliyaasha laamaha Amniga ee Puntland ayaa ku sugan magaalada, waxayna sidaas oo kale qorshe ka leeyihiin isku dhafka ciidamadii soo goostay iyo kuwa Puntland ee horey u joogay, ayna u wada howlgali lahaayeen.
Taliyaasha ciidamada la yimi ayaa doonaya in ay helaan Saanad ciidan iyo dhammaan agabyada ay baahida u qabaan, waxayna sheegeen in ay kusugnaan doonaa saldhigyadii ay horey u joogeen, maadaama ay yihiin kuwa muhiim u ah difaaca gobalka.
Puntland, ayaa soo jeedisay in ay Saldhigyadaas ahaadaan kuwa rasmiga ah ee ciidamada oo aan dib looga soo celin, waxayna sheegtay in ay dhammaan agabyada ay baahida u qabaan ciidamadan la keeni doono goor dhaw.
Gudoomiyaha baarlamaanka, ayaa kulan gaar ah la yeeshay waxgaradka Beesha uu ka soo jeedo ee Warsangali, oo ay ka wada hadleen sida suuragal looga dhigayo sidii loo hayn lahaa ciidamaddan oo ay u heli lahaayeen dhammaan xaquuqda ay leeyihiin, loogana hortagi lahaa damaca Muuse Biixi ee kuwajahan gobalka Sanaag.
Imtixaan adag ayay wajahaysaa Puntland, waxaana gobalka Sanaag hadda kusugan ciidamada ugu badan oo u muuqda kuwa qalabeysan, isla markaasna isku xiran, waxaana aad isha loogu hayaa sidda ay dawladdu ugu jawaabceliso, iyadoo ay dadka deegaanku aad u doonayaa in talaabada dawladdu hadda qaaday ay noqoto mid aan marnaba sideeda waxba iska bedelin.
Nin haduu seexdo oo soo tooso waa isagii uun halamash haday ururan iyo haday iska fadhiyaa iyo haday qayliyaan ama iska aamusaan waa halamash uun
marka ugu horeysa waxan so dhaweynaya Cidamada ka sogostay mamulka muuse Biixi,marka 2aad waxay jogan dhulkodi hadafacdan Xaq ayey uleyihin dhulkoda in aay cadawga ka difacdan,nin hadlayey oo shegtay in uu Cidamadan ababulkoda laha wa maqlahayey umana muqan nin puntland wanag kala dhexeyo,magaranayo siday isula janqadayso.
Hoorta reer puntland miyay ka quusteen tukaraq iyo yube ma kolba tuli ayeey ka qusanayaan raxmaan kow